Plates Ukuxhumana Okubukwayo - Umagazini Design
Ukuxhumana Okubukwayo Ukukhombisa iminyango ehlukene yesitolo sezinto zekhompiyutha i-Didyk Izithombe eza nomqondo wokuzethula njengoba amapuleti amaningana enezinto ezahlukahlukene zekhompyutha ngaphezulu kwawo, esebenza ngendlela yokudlela. Isizinda esimhlophe nezitsha ezimhlophe zisiza ukukhulisa izinto ezisetshenzisiwe futhi kwenza kube lula ukuthi izivakashi zithole umnyango othize. Lezi zithombe zazisetshenziswa nakumabhodi wamamitha ayi-6x3 kanye namaphosta ezothuthukisweni zomphakathi kulo lonke elase-Estonia. Isizinda esimhlophe nokwakheka okulula kuvumela lo mlayezo wesikhangiso ukuthi ubonwe ngumuntu odlula ngemoto.
Igama lephrojekthi : Plates, Igama labaklami : Sergei Didyk, Igama leklayenti : Didyk Pictures.
Ukuxhumana Okubukwayo Sergei Didyk Plates